Information om Corona på soomaali/somaliska
Hadda waxaad soo gaadhay gunaanadka koorsada. Qeybtan waxaad ku heli doontaa wakhti aad kaga fikirto waxaad koorsad ka soo baratey iyo waxaad doonayso inaad wax dheeraad ah ka sii barato.
Markaad dhameyso waxbarashada waa inaad lahaato aqoon ku sabsan:
• Qofka waajibaadkiisa waxbarasha iyo bulshada.
• Taariikhda Swiidhan iyo sida uu kamuunku u shaqeeyo.
• Waajibaadkaaga iyo xuquuqdeyda Swiidhan?
• Fahan buuxa oo ku sabsan sida ay dimuquraadiyadu u shaqeyso.
• Aqoon fursadaada iyo shaqada iyo waxbarashada iyo sida aad hore ugu sii socon karto.
• Aaladaha si aad uga mid noqoto bulshada Swiidhishka.